Palestina: Trano Maintso Lavitry Ny Tanindrazana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Avrily 2018 5:00 GMT
Vakio amin'ny teny Français, বাংলা, 繁體中文, 简体中文, Español, македонски, عربي, English
Nilaza ilay poeta Amerikana Walt Whitman hoe, “Rehefa reraky ny tao amin'ny fihariana, politika, sy ny fiarahana mirindra sy ny sisa ianao- ary nahita fa tsy nisy tamin'ireo nanome fahafaham-po, na mahafa-po tanteraka – inona sisa no tafajanona? Ny voajanahary sisa”. Ao amin'ity lahatsoratra ity, handre ny tantaran'ireo vehivavy roa manana fitiavana lehibe ny voajanahary isika. Masera iray nahita ny akaniny tao amin'ny zaridainan'ny tranon-drelijiosy ary renim-pianakaviana iray ao an-tanàndehibe izay nitondra ny nofinofiny momba ny zaridainan-tanàna eo an-davaragan'ny efitranony.
Nitafatafa tamin'ny Masera Angela, masera manana fitiavana manokana ny zava-maniry i Ruba Anabtawi. Teraka tao Libanona izy saingy monina miaraka amin'ireo Maseran'ny Rozery ao Beit Hanina ao avaratr'i Jerosalema ankehitriny:
Nanohitra ny fandàvan'ny fianakaviany ny hevitra ho lasa masera i Angela Nahran, na Najla araka ny nahafantarana azy talohan'ny nandraisany ny antso. Nisisika izy ary nandamina mba handray ny antso voalohany tany Libanona, mandra-pahatongan'ny fankatoavana ary nangatahin'i Vatikana izy mba hanomboka ny diany ho relijiozy any Jerosalema. Tany am-piandohan'ny taona 1990 tany ho any izany. […] Nitombo tao amin'ny tanàna maitson'i Tourza hodidinina saha i Angela, saingy tamin'izany fotoana izany dia tsy nivelatra tamin'ny fifandraisana tamin'ny zavamaniry izy. Na izany aza, efa tafiditra ao amin'ny tranon-drelijiozy izy izay toerana nanokanany ny ankamaroan'ny fotoanany, na dia teo aza ny fahasarotana tamin'ny voalohany sy ny elanelan-tany amin'ny fianakaviany, dia nahita izy fa ny zavamaniry no iray amin'ny tanjony amin'ny fiainana, ankoatra ny fanokanam-potoana hanompoana ao an-tranon-drelijiozy amin'ny fikarakarana ireo masera zokiolona sy ny fitantanana ny sasantsasany amin'ny raharaha an-tokantrano.
“Ny zavamaniry no voninahitry ny tany, ary ny fivavahana no dikan'ny fiainana”. Avy amin'izany no nampifandraisan'i Angela ny fikarakarana ny zavamaniry sy ny fandraisana ny antso.
Koa ahoana ary no nivelaran'ny fifandraisany tamin'ny zavamaniry?
Niforona efa-taona taorian'ny nahatongavany tao Jerosalema ny fitiavan'i Angela zavamaniry, raha niaraka tamin'ny Mamera Tompon'andraikitra nitsangatsangana manodidina ny zaridainan'ny tranon-drelijiozy izy. Tamin'izany no nianarany ny fianarana fototry ny fikarakarana zavamaniry. Nahatonga an'i Angela ho liana bebe kokoa amin'ireo natiora manodidina azy izany, hanangana fifandraisana manokana sy matanjaka amin'izany. Tamin'izany koa izy no nanaitra ny fahalianan'ny masera hafa, ka nampitombo ny lazan'i Angela tao amin'ny tranon-drelijiozy. Indraindray izy hita manao botira, ary indraindray hita mikarakara ny zavamaniry an-trano sy mamafa ny vovoka avy aminy ka mampamirapiratra azy ireo. Ankoatra ny fanondrahana sy ny fandratsahana ny hazo, dia nandrisika ny masera hiantehatra amin'ny voankazo zanatany izy ary manome torohevitra ny mpikarakara zaridaina tsy hampiasa famonoam-boalavo shimika sy hikarakara ny hazo izy rehefa lasa. Izany no fanampin'ny anjara asany amin'ny fambolena zanakazo. Ireny rehetra izany no jery anaty resaka ifanaovana ao amin'ny tranon-drelijiozy sy ivelany: “Ela velona ny hazo tamin'ny andron'i Angela ary tsy maty.”
Ao amin'ny Akka i Rasha Helwa nanoratra ny momba ny zaridainan'ny reniny:
Mpitsoa-ponenana avy ao an-tanànan'i Iqrith ao amin'ny distrikan'i Safad ny reniko Shadia (Um Iskander), saingy teraka tao an-tanànan'i Rameh ao Galilia.
Niasa ho infirmiera nihoatra ny roapolo taona tao an-tanànan'i Sajur, akaiky ny tanànan'i Rameh izy.
Hatramin'ny nanambadian'ny reniko sy ny raiko tamin'ny taona 1982 sy nifidianany an'i Akka ho fonenany (toerana nahaterahan'ny raiko sy ny fitiavany voalohany – nahazo alalana tamin'ny reniko), nanana nofinofy ny reniko ary mbola manofinofy izany, hanana tranokely eny an-tendrombohitra misy zaridaina ahitana zavamaniry, legioma, voankazo ary ireo voninkazo nofinidiny.
Na dia nitombo aza ny fitiavany an'i Akka, dia mbola manina ny tendrombohitra ihany ny reniko, sy ny zaridaina heniky ny nofinofiny fony tanora tantsaha – inona ihany koa moa no ifandraisany amin'ny tanandehibe? – nofinofy hamokatra handaniany ny androny rehefa tsy eo izahay, zananilahy sy zananivavy, rehefa lehibe izahay ka handao ny tanànakely ka hitady seranana hafa itodiana.
Herintaona teo ho eo izay, nitondra fitoeram-boninkazo miloko hazo ho an'ny reniko ny raiko ary nametraka azy ireny ho eo am-pototry ny varavarankelin'ny efitrano mitodika any amin'ny ranomasina.
Tsy namboly voninkazo miloko tao ny reniko; fa namboly solila (menthe), rambiazina (sauge), sakay mena, romarin…
Rehefa nandany roa amby fitopolo taona tany Akka, nahita fampimirana tsotra ny reniko, izay nahafahany nitondra an'i Rameh sy Iqrith tany an-tranony, ao amin'ny rihana faha-telo amin'ny tranobe tranainy ao an-tanàna voahodidina ranomasina, ary tsy nividy solila tany an-tsena intsony.